Sanad kadib Geeridii AUN Injineer Yariisow Maxaa is badal?…
Dhaawac halis ah ayaa kasoo gaaray qaraxii ka dhacay Aqalka Xukumadda hoose ee Xamar 24-kii July 2019-kii, xiligaas waxa ay u fadhiyeen kulan ay uga hadlayeen xaaladda amni iyo isla xisaabtanka.
Diyaarad gaar ah oo ay soo dirtay Xukumadda Qadar ayaa looga qaaday Magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in madaxa uu firir ka galay, xaaladdiisana aaan dalka waxba looga qaban Karin.
“James Swan kusoo dhawow Muqdisho, waxaana rajeynayaa in uu kaalinkiisa ka qaato xoojinta howlaha muhiimka ah ee Qaramada Midoobay, ujeedka aan usoo dhaweynay waa mid muujineysa kaalinta shacabka Caasimadda” ayuu ahaa hadalkii ugu dambeeyay duqii Muqdisho, saacado kahor inta aan qaraxa Aqalka Xukumadda hoose ka dhicin.
Waxa uu ahaa nin shaqo furan oo meelo kala duwan Xukumadda kasoo shaqeeyay, waxa uu soo noqday Wasiirkii Warfaafinta, waxaa loo wareejiyay Gobolka Banaadir, sidoo kale waxa uu lasoo shaqaayay Xukuumadii dalka soo maray qaarkood.
Xukuumaddii Xasan Cali Khayre ayaa Xiligaas magacawday Guddi dalka keenna meydkiisa Duqii Muqdisho, aas u sameeya iyo diyaarinta goobta la dhinac dhigayo Marxuumka.
Xubnaha Guddiga ayaa kusoo qaaday diyaarad gaar ah oo nuuca Militariga ah oo kasoo qaaday Magaalada Dooxa, saddex cisho kadib ayaa lagu aasay Magaalada Muqdisho 4-tii Agoosto, waxaana ka qaybgalay mas’uuliyiin katirsan DFS, Ehelkiisa, Siyaasiyiin iyo dad aqoon u lahaa iyo asaxaabtiisa ah.
9-kii August 2019-kii, Garoonka kubadda Cagta ee loogu magac badalay Duqii Muqdisho waxaa kulanka ducada ah ka qaybgalay Ehelka Marxuumka oo isugu jiray Hooyada dhashay, xaaskiisa iyo Carruurtiisa, Hogamiyayaasha DFS, Siyaasiyiin xubno kale.
“Duqii Muqdisho iyo Guddoomiyihii Degmooyinka ee ku dhintay Qaraxa waxa ay ahaayeen Shuhado gacan ka xaqdaran dishay, marka laga hadlayo qofka uu ahaa Cabdiraxmaan, waxa uu kamid ahaa dadka kooban ee yaqaano sharciga, kala dambeynta iyo wadanimada” ayuu goobta ka yiri Hogamiye Farmaajo.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada qalabka Sida Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa 24-kii bishaan sheegay in ayaan la xiri Karin kiis dacweedka qaraxii ka dhacay Aqalka Xukumadda hoose ee Xamar sanad kadib.
Sanad kadib Xukumadda Federaalka maku guuleysan doontaa in ay Maxkamad horgeyso dadkii ka dambeeyay qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Aqalka Xukumadda Hoose oo ay ku nafwaayeen Guddoomiyihii Gobolka Banaadir, Guddoomiyaal Degmo, Agaasimayaal iyo lataliyaal la shaqeynayay, waxaana qaraxaas sheegatay Al-Shabaab.
Warbixintaan oo Muuqaal ah ah halkaan ka daawo